Nin dilay Muwaadin Soomaali ah oo Maxkamad lagu soo taagay Mareykanka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Nin dilay Muwaadin Soomaali ah oo Maxkamad lagu soo taagay Mareykanka
written by warsan radio 12/12/2021
Ninka oo lagu Magacaabo Marlow Ramsey Carson ayaa Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa uu ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay liibaan, kaas oo kamid ahaa Soomaalida mudada dheer ku noolaa dalkaas.
Ninkii ayaa waxaa la sheegay in maxkamadda la soo taagay horteeda uu ka qirtay in uu toogasho ku dilay liibaan, waxaana la amray in xabsiga lagu sii haayo si xukunkiisa uu u soo baxo.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Booliska ayaa waxaa lagu sheegay in Marlow Ramsey Carson lagu soo oogay dacwad ah in muwaadinka Soomaaliyeed uu ku dilay Dukaan uu ka Shaqeeynayay sida uu ku dhawaaqay ku simaha xeer ilaaliyaha Maraykanka Charles J. Kovats.
” Sida ku cad dukumentiyada maxkamada, Abriil 27, 2021, Marlow Ramsey Carson oo 30 sano jir ah wuxuu u dhacay Dukaanka Blue Sky Wireless iyo West Bend Furniture oo ku yaal Minneapolis. Inta uu ku guda jiro tuuganimada eedaysanuhu waxa uu qori gacmeed ku qabtay shaqaalaha, wuxuuna lacag ka dalbaday karraaniga dukaanka. Carson ayaa shaqaalaha dukaanka xabadka kaga dhuftay xabad ka hor inta aanu ka bixin bakhaarka oo aanu gelin dhinaca rakaabka ee gaarigiisa, kaas oo si degdeg ah u cararay. Karraanigii bakhaarka ayaa lagu qaaday ambalaas waxaana la geeyey qolka gargaarka degdega ah halkaas oo markii dambe la sheegay in uu dhintay ayaa lagu yiri” War kasoo baxay Booliska.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Maxkamadeynta Ninka ku eedeysan dilka Muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana dacwadda qaadaya Kaaliyaha Xeer Ilaaliyaha Mareykanka Harry M. Jacobs iyo Samantha H. Bates.
Nin dilay Muwaadin Soomaali ah oo Maxkamad lagu soo taagay Mareykanka was last modified: December 12th, 2021 by warsan radio
Akhriso+ Sawiro Duqa Muqdisho oo ka faalo qaaday cafimaadka gabar indhaha ka jiran oo dalka wax looga qaban waayay